Izindawo ze-Indian Online Casino - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Iyalayisha ... Imithetho ephathelene nokugembula eNdiya ayichazwanga kahle. Izindlela eziningi zokugembula kuleli zwe empeleni zikhishwa umthetho njengoba umthetho wezokugembula we-1867 uvimbela umsebenzi noma ukuvakashela amakhasino nezinhlawulo ezincane zobuso noma isikhathi sejele.
Kuze kube manje, izwe alinawo umthetho ocacile ngokugembula. Ukudlala ngokusemthethweni e-India kungaba ezindaweni ezintathu kuphela: iSikkim, iGoa neDaman. EGoa kunamakhasino ayisikhombisa asemhlabeni abekwe ikakhulu emishini yokubheja. Imidlalo yebhodi ikhona ku-casino cruise emihlanu ogwini loMfula iMandovi namakhasino asemhlabeni eSikkim.
Muva nje, ngo-Agasti 2016, e-Macau yavula i-casino ebiza kakhulu kunazo zonke eWynn Palace, okuyizindleko zokwakha ezazisendaweni emlandweni wokwakhiwa kwamakhasino futhi zafinyelela ku-4.2 dollar. Kukhona i-lottery, kodwa kwezinye eziningi nabo bavinjelwe emazweni amahlanu aseNdiya. Ukubheja kwezemidlalo kuhamba kancane, okwakubhekwa njengomdlalo wekhono eNkantolo Ephakeme e-1996.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 Indian Online Casino
Ukugembula ku-India eNdiya
Njengoba uhulumeni enganikezi ilayisense yokusebenzisa izingosi zokugembula online eNdiya, izwe futhi nemithetho ye-otsutstvuetyut ehlose ukugembula nge-inthanethi. Njengoba ukugembula kwasemhlabeni kuvinjelwe engxenyeni enkulu yaseNdiya, abaningi bakholelwa ukuthi lokhu kuyasebenza nasekugembuleni okuku-inthanethi. Kepha ayikho inqubomgomo eqinile kule ndawo, engavimbela abagembuli baseNdiya ukuthi badlale online, ngakho-ke bayakwenza ngaso sonke isikhathi.
Okwamanje, iSikkim yisona kuphela isifundazwe saseNdiya, esisebenza ngemakethe elawulwayo yokugembula online, futhi ehlobo i-2015 ivule ukubheja kwezemidlalo online okokuqala eNdiya. USikkim ubuye abe ngumholi kanye neSikkim Super Lotto yakhe. Isungulwe e2002, iLottery kusesekuphela kwezindawo zokugembula ezinelayisensi ezweni.
Yize kungenzeka ukuthi ngokwesayensi kungenzeka kube nelayisense lezinhlobo ezahlukahlukene zokugembula nokubhejela ezemidlalo ngokuya ngomthetho wezokugembula okuku-inthanethi iSikkim (2008) kanye nemithetho yokudlala online iSikkim (2009), akekho noyedwa opharetha ongakayinikwa ilayisensi ephelele. Ngakho-ke, abadlali baseNdiya abajabulela umdlalo we-poker ne-bingo, ukubhejela ezemidlalo namakhasino aku-inthanethi baphoqelekile ukusebenzisa amasayithi wokugembula aku-inthanethi angaphandle.
Ngasikhathi sinye, abagembuli be-ondiyskie banobuhlakani obukhulu ekuvulweni kwamadiphozithi ngenxa yokuthi ukuthengiselana okuqondile kwezezimali phakathi kwabahlali baseNdiya nezindawo zokugembula zakwamanye amazwe kwavalwa ukugembula online eNdiya. NgoMeyi 2011, i-India yamukela umthetho obumbene wezobuchwepheshe bolwazi, ofaka izinhlinzeko ezithile zokunqanda ukugembula okuku-inthanethi futhi ibeke abahlinzeki be-Intanethi ababhekele ukuvimba izingosi zokubheja kwezilwandle online kwezemidlalo.
Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali base-India
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela e-India, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa kusuka kumishini yama-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile njengeNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi.
Ungafunda futhi ukubuyekezwa kwethu kwamasayithi we-casino e-intanethi, ukuze uqaphele ukukhushulwa okuhle kwe-intanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakalayo kubadlali baseNdiya.
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 Indian Online Casino
2.1 Ukugembula ku-India eNdiya
2.2 Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali base-India
free slot amakhasino imidlalo for fun